Federation Malgache de Lutte : tanjona ny hiatrehana ny Lalao Olympika | NewsMada
Federation Malgache de Lutte : tanjona ny hiatrehana ny Lalao Olympika
Feno tanteraka ny fandaharam-potoana ho an’ny taom-pilalaovana 2016, ho an’ny federasiona malagasin’ny taranja Lutte. Anisan’ny tanjona amin’izany, ny fiatrehana ny Lalao Olympika 2016, hotanterahina any Brezila. Na izany aza, tsy maintsy mbola mandalo fifaninanana fifanintsanana intelo miantoana, hiadian-toerana hiatrehana izany ireo atleta malagasy.
Anisan’izany, ny fifanintsanana voalohany, izay hatao any Alzeria, ny fiandohan’ny volana avrily ho avy izao. Raha sanatria tsy tafita amin’izany, mbola afaka miatrika ny fifanintsanana faharoa indray ny Malagasy, ka ny tapaky ny volana avrily no hanatontosana izany, any Mongolie ary ny fahatelo farany dia any Torkia, ny volana mey.
Ankoatra izay, hisy koa ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, hatao any Egypta, ny volana marsa.
Hampiavaka ity taona ity, ny fametrahana ny ligim-paritra any Atsimo andrefana. Hisy ihany koa ny fanatrehana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, ho an’ny mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, izay hatao any Torkia, ny faran’ny volana oktobra. Hisy koa ny fiofanana avy amin’ny “Confejes”, ary hamarana ny taom-pilalaovana ny volana desambra ho avy izao, ny “Open de Madagascar” sy ny fivoriambe ara-potoan’ny federasiona.
Tsiahivina fa ny volana febroary, no hanomboka ny taom-pilalaovana 2016, ho an’ity taranja Lutte, ity.
Raha hitodihana kosa ny taona 2015, tontosa avokoa ireo fandaharam-potoana. Anisan’ny goavana amin’izany, ny kandidatioran’i Madagasikara, hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy “sénior 2017”.